Masangano Akazvimirira Oga Oshungurudzwa Zvine Hudzamu
Kushungurudzwa kwevemasangano akazvimirira oga nemapurisa pamwe nevatsigiri veZANU-PF, kuri kuenderera mberi nenzira yave kutyisa vashandi vemasangano aya.
Mumwe mushandi wePlan International anonzi ari muchipatara kutaura kuno, zvichitevera kurohwa zvakaipisisa kwaakaitwa nevaimbove varwiri vehondo yerusununguko kwaMutoko.
NeChitatu, vashandi veAction Aid International-Zimbabwe vashanu, vakavharirwa nemapurisa, ndokuzobuditswa vachinzi vanyore magwaro anotsanangura mabasa avanoita. Asi vakanzi vadzoke zvakare neChina kumapurisa.
Ukuwo mamwe masangano anobatsira vanhu nezvekudya, anonzi atombomisawo basa iri, sezvo ari kushungurudzwawo. Ukuwo vatungamiri veZESN vanonzi vari kunetserwa nyaya yekutaura zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika.
Mutori wenhau weStudio 7 Carole Gombakomba aita hurukuro naVaPedzisai Ruhanya, avo vanoshanda ne Crisis in Zimbabwe Coalition, avo vanoti hurumende iri kuedza kutyisidzira vemasangano akazvimirira oga, panguva iyo hurumende iri kuda kuti muitwe zvakare dzimwe sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika.